5 sujets de 21 à 25 (sur un total de 33)
04/02/2011 à 23 h 23 min #22446
Jereo oe avy aiza ny Ratsimiah dia mazava aminao ny aminy
30/03/2011 à 12 h 37 min #22498
Ravelomanantsoa mpanao 100 m ?
tsy avy amin’ny anarana velively mihintsy no maha andriana na tsia, ny olona rehetra dia afaka miova anarana daholo na iza na iza, fa raha ohatra kosa tena zavatra important be aminao izany dia ataoko fa anjaranao ny manao enquetes ary tsy misy maha diso anao na kely aza, ny fianakaviany, ny tanindrazany, ny fomba fiainany etc.., ny olona miseho milaza fa andriana nefa tsy izy dia tsy maintsy fantatra eny foana, ny matik’ambo sy ny kevo_po, no manao izany, omeko exemple ianao, ny anarako dia tsy mitovy amin’ny arriere grand-pere ko, ary ny rainy koa dia anarana afa mihintsy, pour quelles raisons? je ne sais pas , Ny fasana misy ireo razako ireo dia misy didy mihintsy izay mipetraka any amin’ny tribunal izay fantatry ny taranaka rehetra: andriambon’olona no farany mahazo milevina ao, tsy mahazo milevina ao ny andriandranando, zana-dralambo, betsizaraina, tsimahafotsy, manandriana,….etc ary ny hova. Izaho dia miafina amin’ny maha andriana be aho, ny taranaka moa dia misy mbola manaja be ihany io didy io, misy izay tsy matahotra, samy manana ny fomba fijeriny, ary tsymisy afaka micritique, ny vadiko dia mitovy razana amiko, afaka milevina ao, fa ny zanako kosa(lahy) dia efa fantany tsara ny didy, saingy izaho dia manaja izay tiany ho vadiany, efa fantany fotsiny ny souhait ko, amiko tsy dia important amiko intsony izany resaka izany.
23/04/2011 à 15 h 25 min #22534
Dia hono ry tor, ny Andriana be otranareo zany hoy ianao momba ny fasana; Andriamboniolona ny farany miditra ao? otran’ny vaovao zany resakao izany. raha tena andriana be mantsy ny lalan’ny fasana tsy mila alefa any am tribonaly zany fa efa mazava ny fandehany ary fantatra hoeizaavy no miditra amin’ilay izy,ary tsy afaka atao forcing mitsy fa misy fady
12/12/2011 à 15 h 28 min #22763
Manao azafady re fa iray ihany ny RANAVALOTSIMITOVIAMINANDRIANA @ tantaran’ny firenena Merina dia zanaka faravavin’Andriamasinavalona izay nomeny an’Anosimanjaka.
Tsara ihany ny manitsy ny diso e
24/08/2012 à 6 h 14 min #23048
Miarahaba an’i Tor.
Ny momba ny anarana talohan’ny fanjanahantany dia samy mametaka ny azy ny Ray aman-dReny. Raha nisy maty ny zoky dia ataony anarana tsy dia manja ny tonga aoriana mba hahatsara vintana ny zaza ( Tavy… ). Fitiavana sy tahotra izany. Rehefa miteraka ny olona dia afaka miova anarana izy ka raha Ramanana ny zanany voalohany dia lasa Rainimanana ny anarany manomboka eo. Fa ny tena anaran’ny zanaka dia alainy avy amin’ny anarana na sombin’anaran’ireo Razambeny ( matetika anaran-dRazana atambatambatra ).
Mikasika ny Zazamarolahy, Andriamasinavalona, Andriantompokoindrindra, Andrianamboninolona, Andriandranando, Zanadralambo: Raha nandinika ny tantara aho dia nisokatra ny saiko satria hay taranak’izy telo mianadahy mpiray tampo izireo dia Andriamanelo, Andriamananitany, Rafotsindrindra Rasoavimbahoaka. Ny hany « exceptions » angaha dia misy ny nasandratra fa tsy nolovaina ( mitovy amin’ny any Angleterre ) noho ny zava-bita toa an’i Laborde…